I-Epoxy adhesive GT1111 yesitimela esisheshayo
● Lokhu okunamathela kusetshenziselwa kakhulu ukubopha ibhodi lezinyosi, imikhiqizo yebhodi enezinwele, njll., Futhi futhi kungasetshenziselwa ukubopha okuhlanganisiwe kwazo zonke izinhlobo zezinsimbi, izinkuni, ama-tiles, amathayili apolishiwe, itshe, ipuleti le-MgO nokunye. Lo mkhiqizo kulula ukuwusebenzisa, unamandla aphezulu we-bonding ngemuva kokulapha okuphelele, ukumelana okuhle kokucindezela, ukumelana nokugqwala nokungamelana nokuguga.
● Ukumelana okuhle kokucindezelwa
● Ukumelana nokuguga
● Kufanele ifakwe elondolo noma egumbini lokushisa eliphansi, isikhathi esingcono singeqi izinyanga eziyi-6 kuya kwezi-12.
● Imikhiqizo kufanele iqoqwe endaweni eyomile, enomoya opholile futhi epholile, impilo yeshalofu unyaka owodwa, ingaqhubeka nokusebenzisa uma ukuhlolwa kulungile.
● Lo mkhiqizo ungumkhiqizo ojwayelekile oyingozi, kufanele ugcinwe kude nomlilo, umthombo wokushisa, uvikele imvula nokushiswa yilanga, wehlise umthwalo ngokushesha, futhi ugweme umthelela, ukuphambuka, umqulu njll.
Isizinda se-Super aluminium esiminyene soju sokuhlolwa kwezimoto, ipulatifomu yomshini